ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ – ဥရောပအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့
ဧည့်သည်များသည် ဝဘ်ဆိုက်ကို ပထမဆုံးဝင်ရောက်သည့်နေရာနှင့် မည်သည့်စာမျက်နှာမှ ထွက်ခွာသွားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လည်း စောင့်ကြည့်ပါသည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအချက်အလက်ကို အမည်ဝှက်ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားပြီး အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိပါ။, ဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် တင်ထားသော အချက်အလက်.
stonesaudio.nl သည် ဧည့်သည်များနှင့်အတူ ကွတ်ကီးများကို နေရာပေးသည်။. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် အသုံးပြုသူများ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် စာမျက်နှာများအကြောင်း အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန် ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ပါသည်။, ဧည့်သည်များ မည်မျှပြန်လာသည်ကို ခြေရာခံရန်နှင့် မည်သည့်စာမျက်နှာများ ဝဘ်ဆိုက်တွင် ကောင်းမွန်နေသည်ကို ကြည့်ရှုရန်. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. ဤ cookies များကို stonesaudio.nl မှလွှမ်းမိုး၍မရပါ။.
8) ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာရှင်များ
ပါတီအများအပြားသည် stonesaudio.nl တွင် ကြော်ငြာကြသည်။, အားလုံးက သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် cookies တွေကို နေရာချပေးတယ်။.
ဤကြော်ငြာသူများသည် ၎င်းတို့၏ ကြော်ငြာများနှင့် သင့်ဘရောက်ဆာမှ ချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုခံရသည့် ၎င်းတို့၏ကြော်ငြာများတွင် လင့်ခ်များကို အသုံးပြုသည်. အခြားအရာများထဲတွင် ၎င်းတို့သည် ကြော်ငြာရှင်ထံ တိုက်ရိုက်ပေးပို့သော IP လိပ်စာများကို အလိုအလျောက် အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို အသုံးပြုသည်။.
ဤပါတီများအားလုံးတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒရှိပြီး ၎င်းတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန်အတွက် ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို အသုံးပြုပါ။. ဤပါတီများသည် privacy ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ထပ်အချက်အလက်များကိုဤပါတီများ၏ဝဘ်ဆိုဒ်များတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။.
Het gebruik van een DART-cookie door Google, ကြော်ငြာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ပြသရန်ခွင့်ပြုသည်။. ထို့အပြင်၊ ဤကွတ်ကီးကို အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် ကြော်ငြာများပြသရန် အသုံးပြုပါသည်။. DART Cookie ကို အသုံးမပြုတော့ဘဲ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။. အောက်ပါ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ၎င်းကို သင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။: DART